साहित्यकार एवं युवा दार्शनिक दियु पौडेलले सवैलाई रुवाए ! ® मनछुने कथा (नारी ) दुई मिनेट समय दिएर पढ्नुहोस् - Sudur Khabar
साहित्यकार एवं युवा दार्शनिक दियु पौडेलले सवैलाई रुवाए ! ® मनछुने कथा (नारी ) दुई मिनेट समय दिएर पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति : ३० जेष्ठ २०७५, बुधबार १०:४९
साहित्यकार एवं युवा दार्शनिक दियु पौडेलले सवैलाई रुवाए !
® मनछुने कथा (नारी ) दुई मिनेट समय दिएर पढ्नुहोस्
छोरी हिंड छतमा वसेर कुराकानी गरौं भोलि त तिमीले हामीलाई छाडेर घरमा गईहाल्छौ !
आज हामी आमा छोरी पुरा रातभरी कुरा गरौंला,तिम्रो शिरको केशराशी सुम्सुमाउने फेरी कहिले हो..तिमीलाई काखमा सुताउँछु…भोलि तिमी विवाह भएर गएपछी कसले यि सवै गर्छ !
यो भन्दा भन्दै दुर्गाको ऑखावाट ऑशुहरु झर्न थालें
यसरी नरोऊ म यहिं त छु नि विदेश जान लागेको हो र?
नवलपरासीदेखी काठमाण्डौ त्यति टाढा पनि त होईन नी?
वस् छोरी तिमी गएपनी तिम्रो भाईवहिनी,वुवा आमालाई नभुल है..छोरी झन् रुन लागी !
पराईनै सम्झनुभयो है ममी आजै…दुर्गाको ममीको ऑशुहरुले साडीको लहरी भिजिसकेको थियो !
नरोऊ पग्ली मैले त यतिका दिनसम्म संगै वसिस् के गर्लिस् यही चिन्ता लागेर हो नि हामीसंग वस्दा केही दुख नगरेकी..तर मेरो मनले नचाहादा नचाहॉदै पनि विदाई गर्नुपर्यो ..यसो वुवा ममीको मायॉ लागें आईज है…हुन त भुल्छेस् होला आफ्नो वाध्यताले हामीलाई !
छोरी रुन थाली ..मम वुवालाई भनिदिनुस् न मेरो अहिलेनै विवाह गर्नि उमेर भएको छैन भनेर !
उसको ममीले सम्झॉउँदै थिईन …ज्वाईसाव पढे लेखेको अनि जॉड,रक्सी केही खानु हुँदैन कति जाति हुनुहुन्छ रे !
रातवितिसकेको थियो !
केही समय वित्यो दुर्गा अव आमा वन्ने खबर संसारले थाहा पाईसकेको थियो !
उसको ८ महिना पुरा भैसकेको थियो
उसको काकाको छोरीको विवाह हुने भनेर उसलाई पनि निम्तो आयो
उ काकाको घरतिर हिंड्न लागी यत्तिकैमा उसको सासुले भनि:- कहॉ हिड्न लागेकी छोरी..यस्तो हालत मा..
ऊ सोंचेकी थिई विहान वेलुका काम गरेर वाक्क पर्दा कतै गए मन हल्का हुनिथियो त्यसैले मन हल्का गर्न चाहान्थी !!
उसले धेरै विन्ति गरि तर सासुले मानिन
उसले काकालाई फोन गरेर भनि म आउन चाहान्छु काका…उता काका पनि रुन लागें केही छैन छोरी चिन्ता नलेऊ..तिम्रो सासु-ससुरा रिसाउनु हुन्छ यता हामी छौ..!
नारी विनाको घर र माली विनाको फुलवारी दुवै उजाड हुन्छन् !!
केही समय वित्यो दुर्गाले छोरी जन्माईन् ,छोरी पुर्णीमाको जुनझैं वढिरहेकी थिईन !
एक्कासी मानिसन हो परिवर्तन हुँदो रहेछ आजकल दुर्गाको श्रिमानले जॉड-रक्सी खाएर सुत्केरी दुर्गालाई कराउने कुट्ने गर्ने गर्थ्यो ,उसले जॉड-रक्सी खाने वाहीर वाहीरै दुनियॉ वनाएको थियो !
सासु-ससुरा पनि उसलाई केही भन्दैनथें !
दुर्गाले छोरी पाएपछी दुर्गालाई साह्रै पिडा भयो न लोग्नेले कमाएर दिन्छ न आफुले त्यो अवस्थामा के गर्न सक्छे ऊ!
धेरै सकसमा जिन्दगी वितेको थियो!
धन नभएपनी केही साहारा पुरुषवाट हुन्छ भने संसारमै धनी हुन्छिन् नारी
यो पटक दैवले धेरै ठुलो पिडा दिएको थियो !
कति पटक मर्न भनेर पासो गलामा छिराई यता वच्चा च्यॉ च्यॉ गर्दा फेरी त्यो सवै भुलिदिन्थी ,त्य़सैले ऊ न मर्न सकि न ऊ वॉच्न नै !
नारीमा धेरै सहन सक्ने शक्ति हुन्छ सायद कुनै पुरुषलाई पर्ने हो भने पिडा पचाउन सक्दैनथें होला…हुन त संसारमा पिडा नभएको कोही मानिस हुँदैन फेरी पनि जिवन अनौठो छ…जुन पुरुषले धेरै महिलालाई मायॉ गर्छ त्यति उसवाट मायॉ पाउँदैन अनि जति महिलाले पुरुषलाई मायॉ गर्छिन् त्यति त्यहॉवाट नपाउने रहिछन् एकदिन दुर्गाले छिमेकी अन्टीसंग भनेर वेस्सरी रोएकी थिईन् !
एकदिन सानो डिस्कसमा उसको श्रिमान र ऊ विचको वोलिलाई सदाको लागी वन्द भयो..ऊ कयौ पटक आफ्नो पुरुषलाई वोलाउन चाहीं तर अंह सकिन ..!
वच्चाको भविष्य सोंचेर काठमाण्डौमा दिदिको घरमा वस्न थाली
आफ्नाहरु हुन् भनेर सधै सहयोग गर्नपनी त सक्दैनन् नि
उसलाई मनभरी पिडाले थमाईरहेको थियो !
कयौं पटक आफ्नो दिदिलाई मनका कुरा खोल्न चाहान्थी तर कयौं पटक आफैंवाट हारिसकेकी थिई !
आज सम्म त्यो पुरुषको अत्तोपत्तो छैन छोरी हुर्कंदै छे !
यो कुनै घरको कहानी होईन हाम्रो समाजको वास्तविकताको एक झलक मात्र हो !
यहॉ आफ्ना मान्छे आफैं पराई हुन्छन् !
यो लेख कसैको जिन्दगीसंग मेल खाएमा एउटा संयोग मात्र हुनेछ!
क्रमश:- अर्को भागमा